अंग्रेजी बोल्न न-आउँदैमा म गवाँर भएँ ? अञ्जली अधिकारी
काठमाडौं । म्युजिक भिडियो की चर्चित मोडल अञ्जली अधिकारी अ त्यधिक ट्रोल हुने सेलिब्रिटी मध्ये पर्छिन् । विभिन्न अन्तर वार्तामा जिब्रो चिप्लिँदा होस् वा कमजोर अंग्रेजीका कारण होस, फेसबुक देखि टीकटक सम्म उनलाई खिसिट्यूरी गरिएको हुन्छ ।
जवाफमा उनले फेसबुक स्टाटसको कुरा गरेकी थिइन् । रिलेसनसीप स्टाटस बारेको प्रश्नमा अञ्जलीको जवाफ थियो, ‘मेरो स्टाटसमा प्रायः गीतहरु नै हुन्छन् । आफूले खेलेका भिडियोका क्लीप्सहरु पनि राख्छु ।’यो जवाफले सामाजिक सञ्जालमा निकै ट्रोल भइन् उनी ।
सामान्य अंग्रेजी पनि नजान्ने अशिक्षित नायिकाको उपमा पाइन् उनले । कतिपयले चाहिँ अंग्रेजी नजान्नु ठूलो कुरा नभएको भन्दै उनको बचाउ पनि गरे ।यस विषयमा हालै अञ्जलीले प्राइम टाइम टेलिभिजनको कार्यक्रम संगित मालामा कमल सरगमसँगको अन्तरवार्तामा स्पष्टीकरण दिएकी छन्, जुन सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ ।
जुत्ता होइन, चप्पल लगाएर स्कुल गएको हुँ । मलाई अंग्रेजी बोल्न आउँदैन त आउँदैन ।’उनी थप्छिन् ‘मलाई नेपाली बोल्न आउँछ, यसमै प्राउड छ नि त । म मधेसी समाजमा हुर्केँ । मधेसी बोल्न लगाउनुस, बोलिदिन्छु । अंग्रेजी बोल्न नआउँदैन भने मोडलै नमान्ने ?
मलाई जति आउँछ, त्यति बोल्छु । बिगारेर होस वा सुधारेर । बिगार्छु, फेरि सुधार्छु । अंग्रेजी राम्ररी नबोल्दैमा गवाँर भन्न मिल्छ ? यस्तो पनि हुन्छ ?’यद्यपि समयअनुसार सबै कुरा सिक्नुपर्ने भन्दै उनले आफू अहिले सिक्ने क्रममा रहेको पनि बताएकी छन् ।
२०७८ भाद्र १५, मंगलवार १०:१६0Minutes 183 Views